June 2020 - MinSayYar
30th June 2020 Editor
နေပြည်တော်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်မှာ တိရစ္ဆာန်လေးတွေအတွက် အစားအစားတွေလှူဒါန်းပေးလိုက်တဲ့ သက်ထားသူဇာ
နေပြည်တော်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်မှာ တိရစ္ဆာန်လေးတွေအတွက် အစားအစားတွေလှူဒါန်းပေးလိုက်တဲ့ သက်ထားသူဇာ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင် ကြက်တောင်အားကစားမယ်လေး သက်ထားသူဇာကတော့ မနေ့က ဇွန်လ (၂၉)ရက်နေ့မှာ အလှူလေးတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အလှူလေးကတော့ နေပြည်တော်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်မှာ တိရစ္ဆာန်လေးတွေအတွက် အစာကျွေးမွေးဖို့ အလှူငွေ(၁၅၀၀၀၀)ကိုလှူဒါန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သက်ထားသူဇာနဲ့ စားမယ် အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းလှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး သက်ထားသူဇာက ပရိသတ်တွေသာဓုခေါ်ဆိုလို့ရအောင် သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ “မနေ့ကတိရစ္ဆာန်လေးတွေ စားဖို့အတွက် စားမယ်အဖွဲ့နဲ့အတူ နေပြည်တော်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်မှာ အစာကျွေးပြီး အလှူလေးတတ်နိုင်သမျှလှူခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးလဲလှူချင်ရင် တတ်နိုင်သမျှကူညီလှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်နော်။”လို့ မျှဝေဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်ထိ တိရစ္ဆာန်ရုံတွေက ပိတ်ထားသေးတာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေလှူဒါန်းချင်ရင်လည်း ဆက်သွယ်လှူဒါန်းလို့ရကြောင်းကိုလည်း သက်ထားသူဇာကပြောပြထားပါသေးတယ်။ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ သက်ထားလေးကတော့ သူ့ပြုလုပ်တဲ့ အလှူလေးကို ပရိသတ်တွေသာဓုခေါ်လို့ရအောင်မျှဝေပေးထားတာမို့ ပရိသတ်တွေကသာဓုခေါ်ဆိုပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။
(၄) နှစ်ကျော်လာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် မြနှင်းရည်လွင်ကတော့ သူငယ်ချင်းဘဝကနေ အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် လက်တွဲခဲ့တဲ့ ခင်ပွန်းသည် နဲ့လမ်းခွဲပြတ်စဲလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပရိသတ်တွေကို တရားဝင်အသိပေးလာခဲ့ပါတယ် ။ သူမဟာ ဧဒင်နတ်သမီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ရိုက်ကူးပြီးနောက် အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တဲ့အတွက် နှစ်အနည်းငယ် လောက် ပရိသတ်နဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ အနုပညာအလုပ်ကို အားပေးတဲ့ ခင်ပွန်းကြောင့်ပဲ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားတွေ၊ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို ရိုက်ကူးလက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဘာအပြစ် အမှားမှ မရှိဘဲ ရှေ့ဆက်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ ကိစ္စလေးတွေကြောင့်သာ နှစ်ဦးသဘောတူလမ်းခွဲခဲ့ကြပေမယ့် ခင်ပွန်းသည်ကတော့ သူမပေါ် တကယ်ကောင်းတဲ့ ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ပါလို့ ပရိသတ်တွေကိုပြောပြခဲ့ပါတယ် ။ သူမ ဝါသနာပါတဲ့ အနုပညာအလုပ်ကို သူမကလုပ်ချင်သလို ၊ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကလည်း သူဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ချင်တဲ့အတွက် နှစ်ဦးသား တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး လစ်ဟင်းမှုတွေ ဖြစ်မလာခင် […]
ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမှု ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီးသွားပြီဟု ယနေ့ နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ရုပ်ရှင်အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သူရဦးအောင်ကိုက ပြောကြားခဲ့သည်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး မိမိတို့ဌာနကို သီးသန့်တာဝန်ပေးထားပါကြောင်း၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် တာဝန်ပေးပြီးလိုအပ်သည့် ကော်မတီအရပ် ရပ်ဖွဲ့စည်းပြီး လုပ်ငန်းစတင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ဇာတ်လမ်းအခန်းစဉ် စုစုပေါင်း ၁၃၄ ခန်းရှိသည့်အနက် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရိုက်ကူး ပြီးစီးပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်နှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင် စတင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး COVID-19 ကြောင့် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် မတ် ၂၅ ရက်မှစ၍ ခေတ္တရပ်နားထားခဲ့ရာ ယခုအချိန်အထိ ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ကို သတ်မှတ်ကာလ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်းတွင် […]
Grade-10 နှင့် Grade-11 ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်ခက်ခဲနေသဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းကျောင်းဆရာ ဖိတ်ခေါ်နေသော စာသင်ကျောင်းလေး
စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဖိတ်ခေါ်ခြင်း လစာ တစ်လ-၃၅၀၀၀၀(သုံးသိန်းငါးသောင်း) ဖုန်းဆက်ပြီးဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ် ဖုန်းနံပါတ်ပေးထားပါတယ် ချင်းပြည်နယ်၊ မတူပီမြို့နယ်၊ ဆဘောင်းပီကျေးရွာ၊ အ‌ခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း တွင် လက်ရှိအထက်တန်းပြ ဆရာတစ်ဦးတည်းသာရှိနေပါသဖြင့် အထက်တန်းဆင့် Grade-10 နှင့် Grade-11 ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် အခက်အခဲရှိနေပါသည်။ ထိုအခက်အခဲဖြေလျှော့နိုင်ရေးအတွက် ရပ်ရွာမိဘပြည်သူများနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆဘောင်းပီ သားများမိသားစု ( Global Sabawngpisawzy Koinonia) အဖွဲ့မှ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ငှားရမ်းလိုသည့်အတွက် (1) Math (2) Chemistry (3). Physic (4). Bio ဘာသာရပ်များ သင်ကြားပို့ချပေးနိုင်သည့် ဆရာဆရာမများ အလိုရှိနေပါသည်။ လာရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်သော စေတနာ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦး၏ ဉာဏ်ပူဇော်ခ အဖြစ် တစ်လလျှင် လစာ 300000/- ကျပ် (သုံးသိန်း) ညစာကျက်ဝိုင်းကြီးကြပ်ခ =50000/- (ငါးသောင်းကျပ်) […]
အလုပ်လက်မဲ့တွေ အပေါ်ထားတဲ့ ဂျပန်တွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်နှင့် အခမဲ့တွေ များလွန်းတဲ့ မြန်မာပြည်…
အလုပ်လက်မဲ့တွေ အပေါ်ထားတဲ့ ဂျပန်တွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်နှင့် အခမဲ့တွေ များလွန်းတဲ့ မြန်မာပြည်… ဂျပန်နိုင်ငံက တံတားကြီးတွေအောက်မှာ ဖြစ်သလို တဲကလေးတွေထိုးပြီး နေနေကြတဲ့ အိမ်ခြေမဲ့ (Homeless) တွေ အများကြီးတွေ့ရတယ်.. ဂျပန်ပါးမဝသေးခင်မှာ ဘာကြောင့် ဒီလိုလူတွေ ဂျပန်လို နိုင်ငံမျိုးမှာ ရှိနေကြသလဲပေါ့… အစိုးရဘဏ္ဍာငွေ ဒီလောက်တောင့်တင်းခိုင်မာနေတာ.. ပြည်ပနိုင်ငံတွေတောင်ကူညီနေကြတာ…ဘာကြောင့် ဒီလို အိမ်ခြေမဲ့တွေကို မကူညီကြသလဲပေါ့.. နောက်မှ သိလာရတာက.. လူဆိုတာ အလကားတခါရပြီးရင် နောက် ဘယ်တော့မှ လက်ကြောတင်းအောင် အလုပ် မလုပ်ချင်တော့ဘူး.. ဒါကြောင့် တမင်တကာကို မကူညီပဲ ထားတာ…….တဲ့ ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ယူ.. ကိုယ်အသုံးမကျရင် ကိုယ်ခံရမယ်.. ဆိုတဲ့ အသိစိတ်ကို ထည့်ပေးတာတဲ့…. အခမဲ့တွေသိပ်များနေတဲ့မြန်မာပြည်၊ လူတဦးချင်းစီရဲ့ တာဝန်ယူ တာဝန်ခံမှု အသိစိတ်တွေကိုများဖျက်ဆီးနေတာလား..? စိတ်ပူစရာပါ.. စနစ်တကျ […]
နေပြည်တော်တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့တိရိစ္ဆာန်လေးတွေအတွက် တတ်နိုင်သလောက်အစာတွေကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့သက်ထားသူဇာ
မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင်ကြက်တောင်အားကစားမယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သက်ထားသူဇာကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ သူမကတော့ထူးချွန်တဲ့အားကစားမယ် တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတိုင်းမှာလည်းဆုတံဆိပ်တွေကို ဆွတ်ခူးရရှိထားနိုင် သူတစ်ယောက်ပါ။ ယခုနောက်ပိုင်းမှာတော့သက်ထားသူဇာဟာ အနုပညာရှင်တစ်ယောက် အနေနဲ့လည်း ကြော်ငြာတွေမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့အလှူအတန်းဘက်မှာလည်းရက်ရောသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာလည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့်ပိတ်ထားခံရတဲ့ နေပြည်တော်တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်မှာ ရှိတဲ့တိရိစ္ဆာ န်လေးတွေအတွက် တတ်နိုင်သလောက်အစာတွေကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက် လှူဒါန်းခဲ့တာ ဖြစ် ပါတယ်။ အဲဒီအလှူအကြောင်းလေးကိုတော့ သက်ထားသူဇာက”မနေ့ကတိရိစ္ဆာန် လေးတွေစားဖို့အတွက် စားမယ်အဖွဲ့နဲ့အတူနေပြည်တော်တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်မှာ အစာကျွေး ပြီး အလှူလေးတက်နိုင်သမျှလှူခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးလဲလှူချင်ရင်တက်နိုင်သမျှကူညီလှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်နော်။ “ဆိုပြီးသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာ အလှူ ပုံရိပ်လေးတွေအတူဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအလှူ ပုံရိပ်လေးတွေကို လည်း ပရိသတ်ကြီးသာဓုခေါ်လို့ရအောင်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။ Source:THET HTAR Thuzar CRD [zawgyi] မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင်ကြက်တောင်အားကစားမယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သက်ထားသူဇာကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ သူမကတော့ထူးချွန်တဲ့အားကစားမယ် တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတိုင်းမှာလည်းဆုတံဆိပ်တွေကို ဆွတ်ခူးရရှိထားနိုင် သူတစ်ယောက်ပါ။ ယခုနောက်ပိုင်းမှာတော့သက်ထားသူဇာဟာ အနုပညာရှင်တစ်ယောက် အနေနဲ့လည်း ကြော်ငြာတွေမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့အလှူအတန်းဘက်မှာလည်းရက်ရောသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး […]
နေထိုင်တဲ့အိမ်တစ်အိမ် ကြီးလာတာ နဲ့ အမွ် မိသားစုတွေကဝေးသွားတတ် ကြတဲ့အကြောင်း ပြောလာတဲ့ နန္ဒာ လှိုင်
မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ အလှပေါင်းစု စုပြုံပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မင်းသမီးေ ချာလေး နန္ဒာလှိုင်က တစ်ခေတ်တစ်ခါကတော့ အနုပညာလောကမှာ ပြိုင်ဖက်ကင်း ကျော်ကြား သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နန္ဒာလှိုင်က အခုဆိုရင် အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ အလှမ်းဝေး သွားပြီဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ မိသားစုလေးကိုသာ သာယာအေးချမ်းအောင် တည်ဆောက်နေတဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ မိသားစုလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ နန္ဒာလှိုင်က ဒီနေ့မှာတော့ သူမနားလည်ခံယူထားတဲ့ အိမ်တစ်အိမ်ရဲ့ တန်ဖိုးကို ပြောပြလာပါ တယ်။ “အိမ်.. ကျွန်မအတွက်တော့အိမ်ဆိုတာနွေးထွေးရမယ် နေချင်စဖွယ်လေးရှိရမယ် ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလုံခြုံမှုအပြည့်ပေးရမယ်အေးစက်စက်ကြီးဆိုမကြိုက်ဘူး။ အိမ်ကကြီးလာတာနဲ့အမျှ လူတွေကဝေးသွားကြတယ်။ အခန်းတွေများလာတာနဲ့အမျှ လူတွေကပျောက်နေတယ်။ ကိုယ့်အခန်းထဲမှာကိုယ်နေကြပြီး တွေ့ကြဖို့ခက်ခဲလာတယ်။ အဲလိုမဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရမယ်” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ခံယူချက်ကို ပြောပြထားပါတယ်။ နန္ဒာလှိုင်ကတော့ အိမ်ထောင်ရှင်မတစ်ယောက်ပီပီ သူမရဲ့ မိသားစုလေးကို နွေးထွေးလုံခြုံမှုအြ ပည့်ေ […]
မကြာမီ ထုတ်ဝေတော့မယ့် စာအုပ်အတွက် အမှတ်တရ လက်မှတ်များထိုးပေးခဲ့သည့် ကျော်သူ
နိုင်ငံကျော် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဒါရိုက်တာ ကျော်သူကတော့ တစ်ခေတ်တစ်ခါကနေ ယနေ့အချိန်အထိ အောင်မြင်မှုအခိုင်အမာရရှိထားပြီး နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) မှာ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်တာဝန်ယူကာ မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ ပြည်သူ့အကျိုးပြု ပရဟိတအလုပ်တွေလုပ်ကိုင်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ သူဟာ “အပေးအယူ” ဆိုတဲ့ ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ကိုယ်တိုင်ရေးသားထားကာ ထုတ်ဝေတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျော်သူကတော့ မင်းသားဘဝက အော်တိုထိုးပေးရသည့် စံချိန်ကို စာအုပ်ထုတ်တော့မှ ချိုးလိုက်တဲ့အကြောင်းကို “ကျွန်တော့် ပရိသတ်များအတွက် ကျွန်တော်ရေးသားထားသည့် “အပေးနဲ့အယူ” စာအုပ် ယခု ရက်ပိုင်းအတွင်း “ဆန်းစသော်တာ စာအုပ်ထုတ်ဝေရေး” မှ စတင်ထွက်ဝေတော့မည်ဖြစ်ရာ အားပေးသည့် ပရိသတ်များအတွက် ယနေ့ အမှတ်တရ လက်မှတ်များထိုးပေးခဲ့ရာ ယခင် မင်းသားဘဝက အော်တိုထိုးပေးရသည့် စံချိန်သစ် ချိုးခဲ့ရပါပြီ။ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို လက်မှတ်ထိုးရင်းဖြင့် သာဓု သာဓု သာဓုဟု ဝယ်ယူ […]
ဇူလိုင် ၁ ရက်မှစ၍ ယာဉ်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် လာရောက်စရာမလိုဘဲ အမည်ပြောင်းခွင့် ပေးမည်
ဇူလိုင် ၁ ရက်မှစ၍ ယာဉ်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် လာရောက်စရာမလိုဘဲ အမည်ပြောင်းခွင့် ပေးမည် ဇူလိုင် ၁ ရက်မှစ၍ ယာဉ်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် လာရောက်စရာမလိုဘဲ အမည်ပြောင်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှူဦးစီးဌာနမှ ဇွန် ၃၀ ရက်တွင် အသိပေးကြေညာထားသည်။ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှူဦးစီးဌာနမှ ယာဉ်အမည်ပြောင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသည့် COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် လူစုလူဝေးမဖြစ်စေရန်နှင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ယာဉ်ပိုင်ရှင်များ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ရေး အခက်အခဲမဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ယာဉ်အမည်ပြောင်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် လုပ်ငန်းလာရောက်ဆောင်ရွက်ခြင်းအား ဖြေလျှော့ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ “အရင်က ယာဉ်အမည်ပြောင်းဆောင်ရွက်တာကို ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ဆောင်ရွက်ဖို့ လုပ်ထားတာကနေ ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့် လူစုလူဝေးမဖြစ်စေဖို့နဲ့ ပိုင်ရှင်တွေအခက်အခဲမရှိစေဖို့အတွက် ဇူလိုင် ၁ ရက်ကစပြီး ယာဉ်အမည်ပေါက်ပြောင်းလဲတာကို ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ဆောင်ရွက်ဖို့မလိုတော့ဘဲ ဖြေလျှော့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်”ဟု နေပြည်တော်ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှူဦးစီးဌာနရုံးချူပ်မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမျိုးကျော်အောင်က ဇွန် ၃၀ ရက်တွင် မြန်မာတိုင်းမ်သို့ […]
အင်တာနက်သုံးရဖို့ ပေ နှစ်ရာခန့်မြင့်တဲ့ တောင်ထိပ်ပေါ် တက်ရသူများ
အင်တာနက်သုံးရဖို့ ပေ နှစ်ရာခန့်မြင့်တဲ့ တောင်ထိပ်ပေါ် တက်ရသူများ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းက မြို့နယ်တချို့မှာ အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားတာ တစ်နှစ်ကျော်သွားပါပြီ။အဲဒီထဲမှာ ကိုဗစ်ပိုးတွေ့လူနာရှိနေတဲ့ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်လည်းပါဝင်ပါတယ်။ဘူးသီးတောင်က ဒေသခံလူငယ်တချို့ဟာ အင်တာနက်သုံးခွင့်ရဖို့ ပေ နှစ်ရာ နီးပါးမြင့်တဲ့တောင်ထိပ်တွေ ၊ ဘုရားပုထိုးကုန်းတွေပေါ်ထိ ခက်ခက်ခဲခဲတက်ရောက်ပြီး လိုင်းမိတဲ့နေရာမှာ အင်တာနက် သုံးနေကြရပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တောင်ကုတ် ၊ သံတွဲ ၊ စစ်တွေ၊ မောင်တောနဲ့ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်တို့မှာ ကိုဗစ် ၁၉ ပိုးတွေ့လူနာတွေ့ရှိကြောင်း အစိုးရက ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပြီး အဲဒီထဲမှာ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ဟာ အင်တာနက်အပိတ်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်က မြို့နယ်အများစုနဲ့ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်တို့မှ ာအစိုးရက အင်တာနက်ပိတ်ထားတာဟာ ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့မှာ တစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီး ဒေသခံများအပါအဝင် နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းက အင်တာနက်ပြန်လည်ဖွင့်ပေးဖို့ အကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ဟာ စစ်ဘေးရှောင်သောင်းချီရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီး ကိုဗစ် […]